दुखद खबर- मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान नपाएपछि बंगलादेशी कामदार लिने भयो ! « Swadesh Nepal
दुखद खबर- मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान नपाएपछि बंगलादेशी कामदार लिने भयो !
पहिलो रोजाईमा पर्दै आएका नेपाली कामदार लैजान नपाएपछि अन्तत: मलेसियाले नेपाली कामदारको विकल्प खोजेको छ। आगामी अगष्ट महिना भित्रै बंगलादेशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने मलेसियाको तयारी छ। प्रमुख स्रोत गन्तव्य नेपालबाट १३ महिनासम्म कामदार लैजान नपाएपछि मलेसियाका विदेशमन्त्री साइफुद्दीन अब्दुलाह बन्द रहेको बंगलादेशबाट कामदार लिने विषयमा छलफल गर्न बंगलादेश आइपुगेका छन्।